ICT.com.mm မှာ Webcam မျိုးစုံကို ကျပ် ၂၅၀၀၀ က စပြီးဝယ်လို့ရနေပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှာ Webcam မျိုးစုံကို ကျပ် ၂၅၀၀၀ က စပြီးဝယ်လို့ရနေပြီနော်
Online Class တွေပဲသင်မလား? အဝေးရောက်နေတဲ့ မိသားစုနဲ့ချစ်ရသူတွေနဲ့ Video Call မလား? Online Meeting တွေ Video Conference တွေပဲလုပ်မလား ICT.com.mm မှာ Webcam မျိုးစုံကို ကျပ် ၂၅၀၀၀ က စပြီးဝယ်လို့ရနေပြီနော်
ခုဆိုရင် Hoco Brand ထဲက အသစ်ထွက်တဲ့ 2K Resolution ရမယ့် Hoco USB Web Camera တွေကို K30,000 တည်းနဲ့ ဝယ်လို့ရပြီနော်…
Hoco USB Web Camera မှာဆိုရင်…
4 megapixels, 2K built-in HD lens ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
120cm အရှည်ရှိတဲ့ USB2.0 Cable ပါလို့ အလွယ်တကူ Plug ထိုးရုံနဲ့ သုံးနိုင်မှာပါ။
2K built-in Camera ကိုမှ Microphone ပါပြီးသွားမို့ Video Call တွေ အဆက်မပြတ်ခေါ်နိုင်ပြီပေါ့။
Hoco DI06 2K USB Web Camera
Shop here: http://bit.ly/2X7VBiw
အခြားသော brand အစုံက Webcam အမျိုးအစားကောင်းကောင်းတွေ ရှာနေရင်တော့ ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ ဝယ်လို့ရပြီနော်
Shop here: https://www.ict.com.mm/collections/new-arrivals/webcams
Newer အကြမ်းခံပြီး System Upgrade လုပ်လို့ရတဲ့ ရုံးသုံး Laptop တွေရှာနေပြီလား ICT.com.mm မှာ “Lenovo ThinkPad E14-IML T (i3-10th Gen)” တွေရှိတယ်နော်
Older Laptop, Desktop, Wireless Product တွေရဲ့ Broader Coverage အပြည့်ပေးနိုင်ပြီး၊ Wifi Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် Dual Band Wireless Adapter မျိုးစုံ ဝယ်လို့ရပြီနော်